Madaxweyne Farmaajo muxuu ka yiri tabashada Somaliland iyo doorashooyinka maamulada - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Madaxweyne Farmaajo muxuu ka yiri tabashada Somaliland iyo doorashooyinka maamulada
Madaxweyne Farmaajo oo furey kalfadhiga 5-naad ee golaha shacbiga ayaa ka hadlay guulaha dawladu ka gaaray musuqmaasuqa, la dagaalanka argagixisada iyo dawlad wanaaga. Waxaan dib u habayn ku samaynay dakhli ururinta dalka oo hadda bangigu qaado cashuurta.
Wuxuu kaloo sheegay in ay dib u soo celiyeen adarayska internet-ka dalka ee SO. Waxaan ku guulaysanay mashruuc dambi cafinta oo aduunku ku qancay sidaan wax u wadno.
Madaxweynaha ayaa codsaday in la dedejiyo soo gudbinta sharciyada hadhay. Mar uu ka hadlayay isku xirnaanta dalka ayuu sheegay in dawladu diyaar u tahay dib u heshiisiinta dadka Somaliyeed oo dhawaan la mariyay sharciga dibu u heshiisiinta.
Sidaasi awgeedna ay diyaar yihiin inay ka garaabaan tabashooyinka maamulka Somaliland. Dhinaca doorashada maamulada Galmudug iyo Jubba ayuu tilmaamey inuu rajaynayo inay ku qabsoomaan waqtigii loogu talogalay.
Hoos ka daawo qaybta dib u heshiisiinta iyo doorashada maamulada